Paikady teknika 3 ambony ho an'ny mpanonta amin'ny 2021 | Martech Zone
Sarotra tamin'ny mpitory ny taona lasa. Noho ny fisavorovoroan'ny COVID-19, ny fifidianana ary ny korontana ara-tsosialy dia betsaka ny olona no nandany vaovao sy fialamboly betsaka kokoa tamin'ny taona lasa noho ny teo aloha. Saingy ny fisalasalany amin'ireo loharanom-baovao manome izany fampahalalana izany koa dia nahatratra avo indrindra, toy ny firongatry ny vaovao diso nanosika ny fitokisana amin'ny haino aman-jery sosialy ary na ny milina fikarohana aza mba hanoratra ambany.
Ny olana dia manana mpitory manerana ny karazana atiny miady amin'ny fomba hahitan'izy ireo ny fitokisan'ny mpamaky azy ireo, hitazomana azy ireo hifikitra amin'ny vola miditra. Manasarotra ny raharaha izany rehetra izany dia tonga amin'ny fotoana ihaovan'ny mpitory ihany koa ny fahafatesan'ny cookies avy amin'ny antoko fahatelo, izay niankinan'ny maro ho an'ny mpihaino mikendry ny handefa ny doka izay mitazona ny jiro hatrany ary hatrany ny mpizara.
Rehefa manomboka amin'ny taona vaovao isika, izay antenaintsika rehetra fa tsy dia hisavoritaka loatra, ny mpitory dia tokony hitodika any amin'ny teknolojia ahafahan'izy ireo mifandray amin'ny mpihaino mivantana, mba hanapahana ny mpampivelona amin'ny haino aman-jery sosialy ary hisambotra sy hampiasa ny angona mpampiasa ny antoko voalohany. . Ireto misy paikady teknolojia telo izay hanome ny mpitory ny tanana ambony hananganana paikadin'ny angon-drakitra ho an'ny mpihaino azy ireo ary hampitsahatra ny fiankinan'izy ireo amin'ny loharanon'ny antoko fahatelo.
Paikady 1: personalization amin'ny ambaratonga.
Tsy afaka manantena zava-misy ny mpanonta gazety fa hitohy ny fihinanana haino aman-jery goavambe. Ny mpanjifa dia lasa tototry ny fampahalalana diso tafahoatra, ary maro no nihemotra noho ny fahasalaman'izy ireo ara-tsaina. Na ho an'ny haino aman-jery fialam-boly na fomba fiainana aza dia toa maro ny mpijery no tonga amin'ny teboka mahasosotra. Midika izany fa ny mpitory dia mila mitady fomba hisintomana ny sain'ny mpamandrika ary hitazomana azy ireo hiverina.
Ny fandefasana atiny voafaritra tsara indrindra dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hanaovana an'izany. Miaraka amin'ny korontana be dia be, tsy manam-potoana na faharetana ny mpanjifa handamina izany rehetra izany mba hahitana izay tena tadiavin'izy ireo, noho izany dia hitsangatsangana any amin'ireo toeram-pivarotana izay mandahatra ny atiny ho azy ireo izy ireo. Amin'ny fanomezana ny mpamaky bebe kokoa amin'izay tadiaviny, ny mpitory dia afaka manangana fahatokisana kokoa, fifandraisana maharitra amin'ireo mpamaky izay miankina amin'ny mpamatsy atiny ankafiziny indrindra mba tsy handany ny fotoanany amin'ny atiny tsy misy dikany izay tsy raharahian'izy ireo.
Paikady 2: Fanararaotana bebe kokoa ho an'ny teknolojia AI
Mazava ho azy, ny fandefasana atiny manokana ho an'ny mpamandrika tsirairay dia tsy azo atao mihitsy raha tsy misy automatique sy teknolojia momba ny fahaizana artifisialy manampy. Ny sehatra AI dia afaka manara-maso ny fihetsiky ny mpihaino eo an-toerana — ny tsindry, ny fikarohany ary ny firotsahana an-tsehatra hafa — hahafantarana ny safidiny sy hananganana tabilao miavaka ho an'ny mpampiasa tsirairay.
Tsy toy ny cookies, io data io dia mifamatotra mivantana amin'ny olona iray miorina amin'ny adiresy mailaka omeny, manome andiany fahitana marim-pototra kokoa sy marina ary azo antoka kokoa. Avy eo, rehefa miditra indray ilay mpampiasa dia manaiky ny mpampiasa ny AI ary manolotra atiny ho azy izay nanintona ny firotsahana an-tantara. Io teknolojia io ihany koa dia ahafahan'ny mpanonta mandefa azy io ho azy manokana amin'ny atiny amin'ny alàlan'ny fantsona maro samihafa, ao anatin'izany ny fampandrenesana mailaka sy fanosehana. Isaky ny mifidy atiny ny mpampiasa, miha-hendry ny rafitra, mianatra bebe kokoa momba ny safidiny mba hampifanaraka tsara ny fanatontosana ny atiny.
Paikady 3: Paikadin'ny data miova mankany amin'ny data
Ny mamantatra ny fomba hanefana ny fahaverezan'ny cookies dia ampahany amin'ny ady fotsiny. Nandritra ny taona maro dia niantehitra tamin'ny media sosialy ny mpanonta mba hizara atiny sy hananganana vondron'olona mpandray anjara. Na izany aza, noho ny fiovan'ny politikan'ny Facebook, ny votoatin'ny mpanonta dia voalahatra ho laharam-pahamehana, ary ankehitriny, mitazona takalon'aina amin'ny angon-drakitra ho an'ny mpanatrika ihany koa izy. Satria ny fitsidihana tranokala rehetra avy amin'ny Facebook dia fifamoivoizana referral, ny Facebook irery no mitazona izany angon-drakitra izany ho an'ny mpihaino, izay midika fa tsy misy fomba ianaran'ny mpanonta momba ny safidin'ny mpitsidika sy ny tombontsoany. Vokatr'izany dia tsy afa-manoatra ny mpampanonta amin'ny kendrena azy ireo amin'ny atiny manokana fantatsika izay tadiavin'ny mpijery.
Ireo mpanonta dia tsy maintsy mitady fomba hanalavirana ny fiankinan-doha amin'ity fifamoivoizana referansy avy amin'ny antoko fahatelo ity ary hananganana cache data angona mpihaino azy manokana. Ny fampiasana an'ity 'angona fananana' ity mba hikendrena ireo mpihaino amin'ny atiny manokana dia zava-dehibe indrindra satria manjavona ny fahatokisana ny Facebook sy ireo sehatra sosialy hafa. Ireo famoahana izay tsy mampihatra fomba fanangonana sy fampiasana angona ho an'ny mpihaino hanaterana atiny manokana manokana dia hamoy ny fotoana hahatratrarana sy hampiasana mpamaky sy hitondrana ny vola miditra.
Raha manandrana mamantatra ny fomba hitetezana ny “ara-dalàna vaovao” isika rehetra dia lesona iray nohazavaina mazava be: ny fikambanana izay mikasa ny tsy ampoizina, izay mitazona ny fifandraisana matanjaka amin'ny mpanjifany, dia manana tsara kokoa vintana handoavana an'izay fiovana mety hitranga. Ho an'ny mpamoaka lahatsoratra, midika izany fa mampihena ny fiankinan-doha amin'ny antoko fahatelo izay mpiandry vavahady eo aminao sy ny mpamaky anao fa tsy manangana sy manangana tahirin-kevitra ho an'ny mpihaino anao manokana mba hanaterana ny atiny manokana antenaina.
Tags: aiteknolojia artifisialyDatapaikadin'ny dataFacebookpersonalizationmpitoryPublishingpaikadin'ny teknolojiateknolojiapaikadin'ny teknolojia